साधनाले शिखर चुमेका टिका, जसले हात गुमाए तर मनोबल गुमाएनन्
सुन कुमारी थिङ
‘हार्मोनियमको सुरमा रगत लाग्थे, रियाज गर्दा आखाँबाट आँशु आउथे, यसरी कष्टको साथ मैले संगीत सिकेको हुँ ।’
टिका बम्जन– गायक, गीतकार तथा संगीतकार
सानै देखि खेलकुदमा औधी रुची, त्यसमा पनि फुटबल र सितारियोमा अब्बल, टिका बम्जनलाई लाग्यो अब खेलकुदबाटै केही गर्नुपर्छ ।
२१ वर्षको कलिलो उमेरमै जव टिकाले करेन्टमा परेर दुबै हात गुमाए । उनको सपना एकाएक हुरीले उडाए जस्तै भयो ।
टिका आफ्नो खेल सपना पुरा गर्ने बाटो पहिल्याउँदै २०५६ सालमा नेपाली सेनामा भर्ति भएका थिए । नेपाली सेनामा प्रवेश गरेपछि सेना भित्रैबाट खेलकुदमा केही गर्ने सपना भर्ति भएको दुई वर्ष मै टुट्यो , कर्तव्यपालनको क्रममा करेन्टमा परि दुबै हात गुम्यो ।
‘२१ वर्षे जवानी, मनमा अनेकन सपना, जव म हस्पिटलको वेडमा होस्मा आउँदा थाहा पाएँ, त्यतिबेला सम्म सबै भताभुङ्ग भइसकेको थियो’ उनले ती दिन संझिए, ‘आफ्नो दुबै हात छैन भन्ने जव थाहा पाएँ, त्यस पछिका ६ महिना हरेक दिन हरेक रात मैले रोएर बिताएँ ।’
हुन पनि आफू जे कुरामा अव्वल छु भन्ने लागेको थियो त्यसको लागि आवश्यक पर्ने शारीरिक तन्दरुस्तता हराए पछि विकल्प नदेख्ने स्वाभाविक थियो ।
माथि जे कुरा उल्लेख गरियो, त्यो सबै टिकाको इतिहास हो । तर आज तिनै टिका आफ्नो फरक पहिचानका साथ स्थापित छन् । खेलकुदको सपना टुटेका टिकाले अर्को संभावना खोजे र अहिले नेपाली गीत संगीतमा गायक, गीतकार र संगीतकारको बहुप्रतिभालाई सम्हालेकाछन् ।
सर्लाहीको राजघाटमा जेठो छोराको रुपमा २०३५ सालमा जन्मेका टिका सामान्य परिवारमा जन्मेका हुन् । परिवारको जेठो सन्तान भएर पनि होला उनी माथि परिवारले केही भरोसा बोकेको थियो । टिका आफ्नो बाल्यकाल कहिले काठमाडौं, कहिले सर्लाही गरेर विताए ।
एसएलसी सर्लाहीमै गरेका टिकाको खास काठमाडौको यात्रा त्यहीबाट सुरू भयो । मओवादी सशस्त्र क्रान्तीको कारण देश द्वन्द्वमा थियो । संकटकालको समय आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि केही गर्ने सोंचले भर्ति भए पश्चात घटेको घटनाले उनको आशा मात्रै हैन परिवारको आशा र भरोसा पनि टुटेको थियो । असहज परिस्थितिमा आफू र परिवार सम्हाल्न उनलाई गाह्रो पर्यो ।
‘हात गुमाएको ६ महिनासम्म म विस्तारामा रोएरै विताएँ, आफू त्यो अवस्था परिवारको सदस्यलाई समेत सम्झाउन सक्ने अवस्था थिएन’ टिका भन्छन्, ‘मेरो त्यो अवस्थाले आमा मानसिक रोगको सिकार हुनुभयो, उहाँ अहिले पनि त्यसकै औषधि खाइरहनुभएको छ ।’
उनले आफूलाई सम्हाल्दै गए । उनीलाई बच्चै देखि गीत संगीतमा पनि रूची थियो । गाउँघर देखि स्कुलसम्म नाम चलेका उनी सेनामा गएपछि पनि गीत गाउँथे । ०५८ मा उनले एल्बम पनि निकाली सकेका थिए । त्यसबेला महशुस गरे, ‘ममा संगीत प्रति झुकाव पनि छ, यसैबाट माथि उठ्न सकिन्छ कि ? ।’
उनले आफूलाई सम्हाल्दै सांगीतिक यात्रालाई फेरि सुरू गरे । सुरूका दिनामा आफ्नो हात नहँुदा पीडा साथ सिक्दै गइयो । त्यो पल कस्तो थियो त ? ‘सहज थिएन हात भएर सिक्नु र नभएर सिक्नुमा आफूसँग हार्मोनियम थिएन केही दिन हार्मोनियम बिना नै गइयो, केही समय पछि हार्मोनियम नभएको आउन नपाउने भन्ने भयो’ टिकाले ती दिन संझिए, ‘आफूसँग हार्मोनियम नहुँदा तीजको दिन श्रीमतीको मंगलशुत्र बेचेर हार्मोनियम किन्यौं, त्यो रात दुबै जना धेरै रोयौं।’
साँङ्गीतिक यात्रा बिस्तारै अगाडि बढ्दै थियो । परिवारमा आयस्रोत थिएन, आम्दानी हुने काम गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । ‘आफ्नो परिवारको आयस्रोत थिएन, मैले काठमाडौंका सडक र गल्ली गल्ली चहारेको छु, पाइला पाइला नापेको छु’ पुराना दिन सम्झँदै भावुक बनेका टिकाले भने, ‘कति दिन भोक भोकै रहनु परेका पीडा छन्, एक किलो चामलले हप्तै पुराएको, धेरै पटक खोले खाएरै बसेको अनुभव छ।’
संगीत आफैमा साधना हो । जो कसैले पनि संगीतमा साधना गरेको हुन्छ, उसको त्याग हुन्छ त्यसमा पनि टिकाको शारीरिक अवस्थाले झनै त्यो पल अविश्मरणीय बनायो । ‘हार्मोनियमको सुरमा रगत लाग्थे, रियाज गर्दा आखाँबाट आँशु आउथे, यसरी कष्टको साथ मैले संगीत सिकेको हुँ ।’
ती संघर्षका दिन भन्दा अहिले टिका धेरै माथि पुगेकाछन् । उनी धेरै अपांगता भएकाबीचमा मात्रै होइन साङ्ग भनिएकाहरूकाबीच पनि उदाहरण बनेका छन् । देशमा मात्र हैन संसारमै किर्तिमान कायम गर्न सफल भएकाछन् ।
उनका मुखले गीत लेख्ने, बिना बाजा संगीत गर्ने लगायतका ३ वटा विश्व किर्तिमान राखेकाछन् । उनले आर्मी क्लवमै २० एकल साँझ सम्पन्न गरेकाछन् । १८ वटा राष्टिय पुरस्कार तथा अन्य अवार्ड प्राप्त गरेकाछन् ।
टिकाले पहिलो संङ्गीत गरेको गीत ‘बार प्रिय बार काँडेतारले बार’ बोलको गीत हो जुन चर्चित गायिका अन्जु पन्तले गायकी थिइन् । ‘बलेको आगो’ बोलको गीत टिकाले गाएको पहिलो गीत हो । ‘कस्तो भाग्य’ एल्बममा रहेका ८ गीत उनका पहिलो सिर्जना हुन् ।
हालसम्म उनले ३ सय भन्दा बढी गीतको रचना गरेकाछन् । १५ सय जति गीतमा संगीत भरेकाछन् र दुई दर्जन गीतमा स्वर भरेकाछन् ।
टिकाले रचेका गीत र संगीतमा नेपालका चर्चित गायक शिव परियार ,सत्यस्वरुप, राजेश पायल राई , सन्तोष लामा, सुरेश लामा, चन्द्र कुमार दोङ लगायत र गायिका अन्जु पन्त, इन्दिरा गोले, मेलिना राई, मिलन अमात्य, शशिकला मोक्तान लगायत गायक गायिकाले गीत गाएका छन् ।
दुबै हात गुमायता पनि टिका अहिलेको उपलब्धिबाट खुसी छन् । यसैबाट उनको परिवार चलेको छ । नेपाली सेना बनेर देशको सेवा गर्न निस्किएका उनी अहिले संगीतबाट माटोको सेवा गरिरहेकाछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले गीत संगीतबाट जसरी सेवा गरिरहेको छु, त्यो देशको सेवा हो होइन तर म देश संझिएरै लागि परेको छु ।’
टिका बम्जन– गायक
चर्चित अभिनेता ‘बखते’ को निधन
अमेरिकाबाट विश्वले ल्याए ’सपनीमा’ ( भिडियो )
बजगाइ र काफ्लेको ‘जान्छ आँखा नचाहिने चिजमा’
‘किन मरिन म’
दोजिया प्रियंकाको स्विमिङ पोज
‘मुलाको साग’ कांग्रेसमा
कविता : म परदेशी
शाहरुख र अक्षय एउटै फिल्ममा नदेखिनुको अनौठो कारण